पुजालाई फेरि केको रिस ? निर्माता थापालाई अत्ति भो भन्दै लेख्छिन् 'धिक्कार छ तिमिलाई' - www.dthreeonline.com
पुजालाई फेरि केको रिस ? निर्माता थापालाई अत्ति भो भन्दै लेख्छिन् ‘धिक्कार छ तिमिलाई’
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २२, २०७७ समय: १४:३२:१९
ईटहरी/ प्रायः विवाद र झमेलामा परिरहने नायिका हुन् पुजा शर्मा । नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा विवादित नायिकाहरुको नाम लिदा उनको नामपनी आउने गर्छ । बेला बखत विवादका कारण चर्चामा आईरहने पुजा यतिबेला फेरि अर्को विवादको हकदार बन्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
उनले सिधा-सिधी सामाजिक संजालमा जुहारी खेल्न खोजेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । बुधवार उनको सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक पोस्ट देखियो । जहाँ अर्का निर्माता सुभाष थापालाई तिर हानेकी थिइन् । थापा फिल्म “प्रसाद”को निर्माता हुन् । उनले थापालाई अब अत्ति भयो भन्दै “धिक्कार छ तिमिलाई” भन्दै उनलाई ट्याग समेत गरेकी छन् । हेर्नुस् उनको पोस्ट ।
यो पोस्ट उनले अहिले हटाएकी छन । उनको यो अनौठो बानी पुरानै हो । विवादका कुराहरु गर्नु छ र बोल्नु छ भने उनी पोस्ट गर्छिन र केही बेरमै त्यस्लाई डिलेट गर्छिन् । माथिको पोस्ट गर्नु अघिपनी अर्को यस्तै भावको पोस्ट गरेकी थिइन् । त्यस्लाई पनि डिलेट गरिन । यो लेख्नुको पछाडी के विवाद हो भन्ने कुरा त उनिहरु नै जानुन वा आगामी दिनमा खुल्ने नै छ । तर, सेलेब्रेटिहरुको लागि पनि रिस पोख्ने सजिलो माध्यम बनेको छ सामाजिक संजाल ।